Author: Kigara Macage
Ku xad gudub Dastuurka. Fadhiyada Golaha Guurtida waa kuwa furan; waxaana ay noqon karaan kuwa xidhan sida ku cad Dastuurka.
The State of Somaliland lahaa gaar Dastuurka waxaa la qoray dastuurkw kii, oo ahaa kooban meel. Waxa Qaranku yeelanayaa Waax Garsoor, oo hawsheedu ta hay u gar-naqa ka dhaxeeya Dawadda iyo dadka; iyo adstuurka dhexdooda. Inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah amaba wax u dhigma oo dhinaca Diinta ah. Waa inuu xog-ogaal u ahaado xaqaa’iqa dalka ka jira, isaga oo joogay ugu yaraan laba sano ka hor taariikhda doorashada loo cayimay inay qabsoonto.
Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida. Ku-simidda xilka Madaxweynaha marka uu Madaxweynuhu maqan yahay ama uu buko. Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka.
Dastuurka Somaliland – Wikipedia
Siyaasadda Qaran ee waxbarashada asaasiga ahi waa lacag la’aan. Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; ama uu gudan waayo xilkiisa; 4.
Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha. Dawladdu waxay horumarinaysaa hiddaha iyo dhaqanka suubban ee bulshada iyada oo isla markaa laga faa’iidaysanayo aqoonta bulshada adduunka. Lama xidhi karo garsoore ama ku-xigeen Xeer-ilaaliye Guud haddii aanay Guddida Cadaaladdu oggolaanin, hase yeeshee looma baahna oggolaanshaha Guddida haddii garsooraha ama Ku-xigeenka Xeer-ilaaliyaha Guud la qabto isaga oo faraha kula jira dembi ciqaabtiisa ugu yari ay tahay 3 saddex sannadood oo xadhig ah.
Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in ay Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda. Xubintu istiqaalad dhiibto, iskeedna shaqada uga tagto; Goluhuna ka oggolaado. Muwaadin kasta waxa uu xor u yahay in uu ra’yigiisa ku bandhigo qoraal, hadal, muuqaal, suugaan ama qaab kale oo xeerka waafaqsan. Shaqaalaha dawladdu iyo xubnaha ciidamada qalabka somalilans waxay xaq u Ieeyihiin gunnada hawl-gabka iyo kaalmada bukaanka ama shilka iyo kaalmada qofka naafooba oo xeerka ddastuurka.
Waxa xubintu muddada dastuuriga ah hayn doontaa xilka bo magacaabay; isla markaana waayi doontaa xubinnimadii Golaha Wakiilada.
Mashruuc-sharci kasta uu Golaha Guurtidu aqlabiyad ku ogolaaday waa in loo gudbiyo Golaha Wakiilada, kaas oo markaa: Gudidda Cadaaladdu waa hay’adda hoggaamisa maamulka Garsoorka, waxayna ka kooban tahay: Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Haddii uu ku qanci waayo Madaxweynuhu warbixinta Xeer-ilaaliyaha Guud, wuxuu amrayaa inuu Xeer-ilaaliyaha Guud la noqdo dacwadiisa.
Inay sameeyaan cilmi-baadhis nooc kasta ha ahaadee iyagoo ka eegaya dhinaca Diinta, gaar ahaan horumarka cilmiga sayniska iyo Diinta. Bannaanaanshaha Jagada Golaha Guurtida iyo soo Buuxinteeda. Buuxinta Jagada Golaha Wakiilada. Guddida Culimadu waa guddi madax-bannaan oo u xilsaaran: Garsoorka Garsoorka ee Somaliland.
Waa inuu siyaasadda ka madax bannaan yahay.
Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Inkastoo Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ahaa madax-bannaan muddo gaaban ee Junewaxaa ka dib midaysan la Talyaani Somaliland si ay u sameeyaan Soomaaliya.
Dambiyada laga gab xuquuqda qofka sida xasuuqa, di maxkamad la’aan ah, jidh dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf. Uu ku dhaco xukun ciqaabeed kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday. Golaha cusub waxa uu qabanayaa fadhigiisa ugu horreeya 30 soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa maalinta Iagu dhawaaqo go’aamada doorashada; waxaana isugu yeedhaya Madaxweynaha Jamhuuriydda.
Qofna xorriyaddiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. Xeerarka degdegga ah waxay yeelan doonaan awoodda xeerarka ka soo baxa Golayaasha Wakiilada iyo Guurtidawaxayna dhaqan gelayaan marka uu saxeexo Madaxweynuhu. Magacyada Guddiga Isku-duba-ridka Dastuurka: Jideynta cashuuraha, takaaliifta, iyo tallaabooyin kale oo kor Ioogu qaadayo dakhliga. Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada.
Xeerka ayaa xadaynaya muddada ugu badan ee qof loo hayn karo baadhitaan. Inay ku tilmaanaadaan xisbi siyaasadeed ama urur gaar ah oo Diineed.
Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka. Si ay u suurta gasho daxtuurka Aftidu, waxa waajib ah in la soo saaro Xeerka Aftida iyada oo laga shiidaal-qaadanayo tilmaamaha Dastuurku asteeyey; waxaana la magacaabayaa guddida qaban-qaabinta Aftida si waafaqsan Dastuurka.
Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha.
Spmaliland Xukuumadda-dhexe ee gobollada iyo degmooyinka waxa caddaynaya xeer gaar ah. Masaajidku waa goob cibaado, waxaanu mudan yahay xurmayn. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Hab-maamuuska Madaxda Sare ee Qaranka. Dhaqan-gelinta Dastuurku waxay ka bilaabmaysaa marka afti loo qaado, natiijada aftiduna soo baxdo, waxana si ku meel gaadha loogu dhaqmi karaa muddo saddex sannadood gudahood ah oo ka bilaabmaysa taariikhdii uu oggolaaday shirweynihii 3aad ee Beelaha Somaliland.